“Trace the Face” - Muhaajiriinta Yurubka ku sugan - Siyaasadda Axwaasha Qaaska
“Trace the Face” - Muhaajiriinta Yurubka ku suganDib u soo Celinta la-Xiriirka Qoyska
Bogga Hore العربية دری English Français پښتو Soomaali Español ar dr en fr ps so es
Bogga horeCurrently selected
Bartaan soo dhig sawirkaaga
Dalalka ka Qayb Gala
Siyaasadda Axwaasha Qaaska
​< Bogga hore
Tani waa qeyb laga soo minguuriyey siyaasadeena axwaasha qaaska. Siyaasaddan oo dhameystiran waxaad heli kartaa iyadoo ku qoran luqada Ingiriisiga.
Qoraaladda khadka ku jira
Guddiga Caalamiga ee Laanqeyrta Casa (ICRC) ama Jamciyad Qarameedyada Laanqeyrta Cas iyo Bisha Cas waxay waxay khadka gelin karaa liisas la isku haleyn karo ee dadka maqan iyo qoysaskooda, ka dib marka warbixinta laga soo hubiyo goobta shaqada, isla markaana ay qoysaska dadka maqan ogolaadaan qoraalada.
Marka ay tahay u daneynta ka faa’iideystayaasheena iyo si loo raadiyo loona wargeliyo qoysaskooda, waxaa dhici karta inaan daabacno magacyada dadka dhaawaca ah ama dhintey, ama sawiro (aan magacyo laheyn) ee carruurta ay qoysaskooda kala lumeen.
Marka warbixintaada ama tan qoyskaada la daabaco, waxaan awoodi karnaa inaan tirtirno ama wax ka bedelno inta ay ku jirto websiteka haddii loo baahdo ama aad adiga codsato laakiin ma tirtiri karno waxna kama bedeli karno haddii warbixintu ay ku soo baxdo websiteyo kale ama saxaafadda.
Warbixinadee adiga lagaa ururiyaa
Waad booqan kartaa inta badan bogagga (sida kuwa wararka, warbixinada howlaheena, liisaska dadka) adiga oo aadan sheegin qofka aad tahay.
Waxaan warbixin kaa qaadna marka aad adiga ogolaato oo keliya:
si aad codsi u soo gudbiso, nala soo xiriir ama warbixin noo soo gudbi
si loo daabaco magacaada ama magaca qofka maqan
ama isku qor mid ka mid ah adeegyadeena khadka ku jira
Sideen u adeegsanaa warbixintaada
Warbixintaada waxa keliya ee loo adeegsadaa in lagu bixiyo adeeg aadaminimo, in lagu horumariyo websitekeena iyo warbixin lagugu soo diro. Warbixintaasi waxa lagu qeybiyaa gudaha ICRC-da iyo Jamciyad Qarameedyada Laanqeyrta Cas iyo Bisha Cas marka laga reebo haddii si kale loo qeexo. ICRC-da kama iibsato, kamana kireyso wrbibintaada cid kale
Sidee warbixintaadu u xafidan tahay
ICRC-du waxay qaadeysaa tallaabo kasta oo macquul ah oo lagu xafidaayo warbixintaada. Laakiin si buuxda uma xaqiijin karno in xiriirkaada qaaska ah aan weligiis la soo dhexgelin ama si qaldan loo isticmaalin.
Marka aad bogga websiteka isticmaaleysid waxaan kugula talineynaa inaad ka fogaato gelinta warbixino ama dirista farriimo xambaarsan warbixino naftaada ama qof kale khatar gelin kara.
Fadlan codsiyada iyo su’aalaha ku soo hagaaji ICRC Nayroobi .
< Bogga hore